I-Echo Base - indawo yokuhlala efanelekile yabangu-10 eDinner Plain
Ikhaya leqhwa lomndeni eliphelele, elinakho konke okudingayo endaweni enhle nethule ye-de-sac e-Dinner Plain.
Kunendawo eningi evulekile esitebhisini somnyango - ilungele ukudlala kweqhwa komndeni. Itholakala eduze nenkaba yedolobhana, kuyindlela elula yokuhamba ngezinyawo ukuya ezindaweni zokudlela, imigoqo, izitolo ezitholakala kalula, izindawo zokuqasha eqhweni kanye nezitolo. Ibhasi laseMount Hotham likude kakhulu, noma uma umusha eqhweni umgijimi oqalayo we-Dinner Plain useduze.
Le ndawo yokulala enamakamelo amathathu ivulekile, inazo zonke izinsiza ozidingayo, futhi igcwele ophahleni ngobuhle be-alpine. Isifudumezi sezinkuni esivuthayo esineziko lamatshe endawo sizokugcina ufudumele ngobusuku basebusika obuneqhwa futhi amaphaneli kagesi kuwo wonke amagumbi ahlinzeka ngokunethezeka okuphezulu. Isabalele emazingeni amathathu, indawo yokulala ihlalisa izivakashi eziyi-10 ngokunethezeka.
Indawo ephansi: Isethi yezinyathelo ezithambile ikuletha emnyango ongaphambili. Igumbi lokungena elivulekile linendawo yokuhlala yokuthi wenze amabhuzu akho, igumbi lokomisa elinendawo eningi yokulenga zonke izingubo zakho zangaphandle ze-ski kanye negumbi lokugezela / elondolo elihlonyiswe ngokuphelele elineshawa, indlu yangasese, umshini wokuwasha nokomisa. Ngaphakathi komnyango uzothola ikhishi elikhulu elivulekile lekhishi / indawo yokuhlala / yokudlela iphelele nakho konke ukunethezeka kwezidalwa. Ikhishi linohhavini kagesi nesitofu, umshini wekhofi we-Nespresso, i-microwave, i-pantry nazo zonke izitsha nezinto zengilazi ozozidinga. Osofa abakhulu kanye ne-LCD yesikrini esiyisicaba se-TV kwenza ubusuku bamamuvi bomndeni bujabulise, noma usonge kwesinye sezihlalo ezithokomele zefasitela ngencwadi futhi ujabulele ukukhithika okuvela ekufudumaleni kwangaphakathi. Isitezi esingemuva sakhiwe ku-BBQ futhi iyindawo enhle yokujabulela indawo yakho enhle ezungezile.
Isitezi sokuqala: Igumbi lokulala eliphakeme linombhede olingana nenkosi (ongase uhlukaniswe ube ngabantu abangabodwana ababili uma ucelwa), amatafula amabili aseceleni kombhede anamakhabethe nendawo yokulenga. Igumbi lokulala lomndeni linombhede olingana nendlovukazi, futhi elinamatafula aseceleni kombhede nendawo yokulenga, futhi ku-archway kukhona eminye imibhede emibili eyodwa. Igumbi lokugezela lomndeni linendawo yokugeza kanokusho ye-spa esekhoneni (eneshawa ngaphezulu) kanye nendlu yangasese ehlukile isho ukuthi asikho isidingo sokuphazamiseka.
I-Loft: Khuphuka ngezitebhisi (akukho kuladi okudingekayo) futhi ujike indlela eyodwa emibhedeni emibili eyodwa, noma enye inkomba iveza umbhede osayizi wenkosi (ongahlukaniswa ube ngama-single amabili uma uceliwe). Kukhona futhi isikrini esiyisicaba se-LCD phezulu lapha - indawo enhle yokuthi izingane zibe nendawo yazo yokuzijabulisa.
4.93 ·56 okushiwo abanye
- I-Mount Hotham ski lifts iyi-15min emfushane yokuhamba
- Ihhotela i-High Plains inikeza ukudla okumnandi, i-pizza efakwe ngokhuni, itafula lebhilidi, ibha kanye nomculo obukhoma ebusika.
- I-Dinner Plain Hotel inikeza indawo yokudlela enobungane yomndeni, amabhiliyade, imicibisholo, ibha, igumbi lokudlala lezingane kanye neziko elikhulu elivulekile
- I-Ramada resort isingatha indawo yokudlela ecolisisiwe, ikhofi noshokoledi abashisayo kuyinto ekhethekile, futhi kunendawo yokuphumula ekhululekile enomlilo omkhulu ovulekile.
- I-Mountain Kitchen Cafe inekhofi elimnandi, izinto ezithokozisayo ezenziwe ekhaya nemikhiqizo yasendaweni
- I-Blizzard Brewery iyiphisi eliphezulu kakhulu e-Australia khona lapha e-Dinner Plain!
- I-Onsen Spa and Retreat ihlanganisa indawo yokuzivocavoca, iphuli, i-onsen yangaphandle kanye nezindawo zokungcebeleka zasendlini nama-saunas kanye nemenyu ebanzi yokwelashwa kobuhle.
- I-Myabi Hair Salon - U-Adele ungumlungisi wezinwele ongcono kakhulu emhlabeni! Futhi imikhiqizo ye-Aveda ayisebenzisayo iyamangalisa futhi. Qiniseka ukuthi ubhukha kusengaphambili.
- Ama-Hoy awusizo kakhulu ekuqashweni kwezingubo kanye nokushushuluza
- Ukupaka ebusuku kanye nokushushuluza kwabaqalayo e-Scrubbers End
- Umthambeka weToboggan
- I-tubing slope (evulekile nasehlobo)
- Izindlela ezibanzi zokuhamba kanye ne-x-country ezungeze i-Dinner Plain
I'm a busy working mother, who likes to take the family travelling as often as we can. I love skiing, dining out and spending time with friends.
Sicela uzizwe ukhululekile ukuthumela i-imeyili ku-Jess uma unanoma yimiphi imibuzo mayelana nokuholela noma ngesikhathi sokuhlala kwakho. Sizodinga inombolo yakho yeselula ukuze sikwazi ukukwazisa ngekhodi yomnyango ekuseni lapho ungena.